घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » उड्डयन » अपडेट: युनाइटेड एयरलाइन्स एक COVID-19 दुःस्वप्न को अनटोल्ड स्टोरी जारी छ
उड्डयन • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • पर्यटन • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
एयर विस्कॉन्सिन द्वारा संचालित युनाइटेड एयरलाइन्सको उडान ३ 50४२ मा शिकागो बाट मिल्वौकी उडेका ५० यात्रुहरु कोभिड -१ contract को सिकार भएमा उनीहरु सस्पेंसमा पर्नेछन्। यो उडान लाई कहिले प्रस्थान गर्न को लागी अनुमति दिनुहुन्नथ्यो, र यो एक उडान परिचर र कप्तान द्वारा असुरक्षित को रूप मा पुष्टि गरीएको थियो।
एफएए सम्म पुग्यो eTurboNews र मुद्दा स्वीकार गरे।
एफएएले बतायो eTurboNews दुबै वातानुकूलन प्रणाली भ broke्ग भयो र यो विमान को लागी यात्रुहरु संग उडान गर्न को लागी असामान्य थियो, तर अवैध छैन
एफए बताउनुहोस् eTurboNews कि एक लूपपोल यस कथा को कारण पत्ता लगाईएको हुन सक्छ। गैर महामारी समयमा के ठीक छ, एक महामारी को समयमा सुरक्षित नहुन सक्छ। अर्को अपडेट आउने छ
युनाइटेड एयरलाइन्सको यात्रुवाहक उडान जहाँ खराबीका कारण एयर फिल्टरेशन बन्द गरिएको थियो उड्न दिइयो।
यो मुद्दा टेकऑफ भन्दा पहिले थाहा थियो र बेवास्ता गरियो।
युनाइटेड एयरलाइन्स यूए ३3742४२ शिकागो बाट अक्टोबर ४ मा मिलवाकी।
स्कट किर्बी, युनाइटेड एयरलाइन्सका सीईओ, जुलाई २०२० मा भने: "हामी जान्दछौं कि एक विमान मा वातावरण सुरक्षित छ, किनकि एयरफ्लो रोग को प्रसारण लाई कम गर्न को लागी डिजाइन गरीएको हो, त्यसैले पहिले हामी हाम्रो HEPA निस्पंदन प्रणाली मा हावा को प्रवाह अधिकतम, हाम्रो चालक दल र हाम्रा ग्राहकहरु को लागी राम्रो। हावाको गुणस्तर, एक सख्त मास्क नीति र नियमित रुपमा कीटाणुरहित सतहहरु संग संयुक्त, एक हवाई जहाज मा COVID-19 को फैलावट को रोकथाम को लागी निर्माण ब्लक हो।
यो देख्दा दु: ख लाग्दछ कि उही एयरलाइन्सले महामारीको बेला सुरक्षित रुपमा एयरलाइन्स संचालन गर्ने एकमात्र तरीकाको रुपमा यसको सीईओले गरेको प्रशंसालाई बेवास्ता गरे।
शिकागो मा युनाइटेड एयरलाइन्स मर्मत कप्तान उड्डयन UA 3742 एयर फिल्टर प्रणाली मिल्वौकी को लागी यो छोटो उडान मा प्रयोग गर्न सकिदैन जान्न को लागी उड्न को लागी प्रोत्साहित गरियो। बहाना: एयर विस्कॉन्सिन रखरखाव मिल्वौकी मा छ - यात्रुहरुलाई दिमाग कहिल्यै।
यूए ३3742४२ मिल्वौकी आधारित कम्यूटर एयरलाइन्स एयर विस्कॉन्सिन द्वारा संचालित थियो, एक सीएल using५ को प्रयोग गरी, जुन एक सीआरजे २०० विमान जस्तो देखिन्छ। क्यानाडायर सीएल 65५ एक ५० सिटको विमान हो जुन क्युबेक, क्यानाडास्थित बम्बार्डियर, १ 200 २ देखि २००। को बीचमा बनाइएको थियो।
जब eTurboNews बम्बार्डियर टेक्निकल सपोर्ट भनिन्छ, यो प्रकाशनलाई भनिएको थियो कि विमान धेरै पुरानो थियो वर्तमान अनलाइन समर्थन गर्न को लागी।
धन्यवाद अस्पताल ग्रेड उच्च दक्षता particulate हावा (HEPA) फिल्टर, particulates को विशाल बहुमत (कीटाणुहरु र भाइरल श्वासप्रश्वास बूंदहरु सहित) आधुनिक एयरलाइन केबिन हावा बाट नियमित अन्तराल मा हटाईन्छ किनकि यो को माध्यम बाट साइकल चलाईन्छ र ताजा हावा संग बदलिन्छ। यो धेरै ५० सीट क्षेत्रीय जेट भन्दा ठूलो सबै विमान मा ठाउँ लिन्छ यद्यपि केही एयरलाइन्स ती विमानहरुमा अब HEPA निस्पंदन टेक्नोलोजी मा लगानी गरीरहेका छन्।
के स्पष्ट छ, यदि कुनै पनी यात्री उडान मा कुनै वायु परिसंचरण हुदैन, यसले त्यस्ता यात्रुहरु र चालक दल को कोभिड १ as जस्ता कीटाणुहरु लाई समात्न को लागी खतरामा पार्नेछ। eTurboNews न्यूयोर्क मा उड्डयन वकील ली, र एतिहाद एयरवेज को एक पूर्व उपाध्यक्ष वीजे पी, यो पुष्टि गर्न पुग्यो।
यो अर्को यात्रु बाट feet फिट टाढा रहन को लागी सिफारिश गरीएको छ, जुन पक्कै पनी कुनै पनि वाणिज्यिक विमान मा असंभव हुनेछ, विशेष गरी एक पूर्ण बुक गरिएको कम्यूटर जेट, जस्तै UA ३6४२ अक्टोबर ४ मा।
कुनै सामाजिक दूरी बिना, उचित हावा निस्पंदन एक मात्र चीज हो कि एक यात्री र भाइरस को बीचमा खडा हुन सक्छ।
UA ३3742४२ मा शिकागो O'Hare बाट मिल्वौकी सम्म ४ अक्टोबर को संचालनमा, युनाइटेड एयरलाइन्सका ग्राउण्ड स्टाफले बोर्डि area्ग क्षेत्रमा घोषणा गरे कि यो एयर कंडीशनिंग समायोजन नहुँदा यो विमानमा थोरै तातो हुन सक्छ। कुनै बिन्दुमा यो समझाईएको थिएन कि सम्पूर्ण भेन्टिलेसन प्रणाली बाहिर थियो, र यो दुबै यात्रु र चालक दल लाई कोरोनाभाइरस वा कुनै अन्य हवाई रोगहरु लाई समात्न को लागी कमजोर बनाउनेछ।
यूए ३3742४२ शिकागोको रनवेमा ट्याक्सी लगाइयो, र भित्रको तापक्रम पहिले नै यति तातो थियो, कि अधिकांश यात्रुहरुलाई पसिना आउन थाल्यो, र केहि अरुलाई खोकी लाग्न थाल्यो।
हावा परिसंचरण प्रणाली कहिल्यै आएन, तर विडम्बना, उडान परिचर गर्वका साथ नयाँ युनाइटेड एयरलाइन्स सफाई शासन को व्याख्या गरे।
जब निजी रूपमा सोध्नुभयो, उही उडान परिचरले भन्यो eTurboNews कि उनी त्यो उडान मा हुन डराएकी थिइन् र अघिल्लो उडान मा वेंटिलेशन प्रणाली शिकागो मा व्यवहार गरिनेछ भनेर प्रतिज्ञा गरिएको थियो। उनले भनिन् कि उनी अनिच्छाले मिल्वौकी, जुन उनको घर पनि थियो, जारी राख्न सहमत भएकी छिन्, उनी भन्छिन् कि उनी फेरि यो विमानमा उड्न काममा फर्किनन्।
eTurboNews बारम्बार युनाइटेड एयरलाइन्स र एयर विस्कॉन्सिन सम्म पुग्यो कि यस फिल्टर मा यो उडान मा प्रयोग गरीयो भनेर स्पष्टीकरण प्राप्त गर्न को लागी। दुबै बाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
जाहिरा तौर पर शिकागो मा, एक यूए हब, युनाइटेड एयरलाइन्स मर्मत समस्या संग सम्झौता गर्न चाहँदैनन् र मिल्वौकी को लागी उडान को लागी संचालन गर्न को लागी सुझाव दिईयो, त्यसैले विमान मिल्वौकी, एयर विस्कॉन्सिन घर आधार मा मर्मत गर्न सकिन्छ।
eTurboNews अवतरण पछि पायलट संग कुरा गरीयो र यो एक महामारी को समयमा एक खराबी भेन्टिलेशन प्रणाली संग एक पूर्ण-बुक उडान संचालित गर्न को लागी सुरक्षित छ कि भनेर सोधियो। पाइलटले स्वीकार गरे eTurboNews यो थिएन, र उनले माफी मागे।
अर्का एक यात्रीले भने कि उनी एक सेवानिवृत्त कप्तान थिए र एयर विस्कॉन्सिनका कप्तानले यो विमान चलाएका कारण दुखी थिए।
eTurboNews युनाइटेड एयरलाइन्स सम्म पुग्न धेरै पटक थाहा पाउन को लागी यो उडान मा यात्रुहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ, तर फेरि त्यहाँ कुनै प्रतिक्रिया आएको छ।
eTurboNews युनाइटेड एयरलाइन्स सम्म पुगेर स्पष्टीकरण माग्दै। मिडिया सम्बन्ध बताउनुभयो eTurboNews, यो उडान को लागी कुनै घटना लगईन गरीएको थिएन।
यूए ग्राहक सेवाले भन्यो, यो कुनै ठूलो कुरा थिएन किनकि यो केवल एक धेरै छोटो उडान थियो, तर उनीहरु "असुविधा" को लागी 5,000 लगातार फ्लायर माइल क्रेडिट हुनेछन्।
"क्रिस" को नाम बाट एक सज्जन संग कुरा भयो eTurboNews प्रकाशक Juergen Steinmetz। उनले भने, कि उनी एयर विस्कॉन्सिन को लागी कर्पोरेट सुरक्षा को उपाध्यक्ष थिए। उनले घटना स्वीकार गरे र माफी मागे। उनले थप जानकारीको साथ ईटीएनमा फिर्ता आउने वाचा गरे। यो भएन, तर यसको सट्टा एयर विस्कॉन्सिन कुनै सम्पर्क नाम वा हस्ताक्षर संग एक ईमेल पठाईयो।
शिकागो बाट मिल्वौकी सम्म सेवा संग उडान 3742 मा तपाइँको भर्खरको अनुभव को बारे मा। सुरक्षा एयर विस्कॉन्सिन मा हाम्रो नम्बर एक प्राथमिकता हो।
विमानले FAA एयरवर्थनेस मापदण्ड पूरा गर्यो र हाम्रा चालक दल, हाम्रा रखरखाव विशेषज्ञहरु संग परामर्श गरी, उडान संचालन गर्न को लागी सुरक्षित भएको सुनिश्चित गरियो। हामी तपाइँको उडान मा अनुभव गरेको कुनै पनि असुविधा को लागी क्षमाप्रार्थी छौं र हाम्रो ध्यानमा यो मामला ल्याउन को लागी धन्यवाद।
जुर्जेन स्टेनमेट्ज भन्छन्:
अक्टोबर 10, 2021 मा 03: 27
प्रिय एल लाजुली
मात्र तपाइँको टिप्पणी स्पष्ट गर्न को लागी।
युनाइटेड एयरलाइन्स १ के ग्राहक सेवाले मलाई एक दोस्रो फलो अप कल मा भन्यो कि उनीहरुले मलाई ५K माइल क्षतिपूर्ति दिए। मैले जवाफ दिएँ कि म क्षतिपूर्ति पछि होइन तर एक स्पष्टीकरण थिएँ र यो हेर्न चाहन्थें कि यूए बोर्ड मा यात्रुहरु लाई ट्र्याक गरीरहेको थियो।
यस रेकर्ड गरिएको कल मा १ K ग्राहक बाट महिला यो एक छोटो उडान मात्र हो र कुनै थप क्षतिपूर्ति पूर्ण रूपमा मेरो चिन्ता लाई बेवास्ता गर्न अधिकृत गर्न सकिन्थ्यो भने।
मैले मिडिया सम्बन्धका मानिसहरुलाई प्रतिक्रियाको लागी सोधे।5पछि ईमेलहरु मात्र प्रतिक्रिया प्राप्त एक प्रकाशित र एयर विस्कॉन्सिन बाट थियो।
मैले सुरक्षा को क्रिस वीपी संग कुरा गरे
एयर विस्कॉन्सिन जो मुद्दा को बारे मा जान्दथे र मलाई फिर्ता पाउने वाचा गरे - उनले कहिल्यै गरेनन्।
एल लाजुली भन्छन्:
अक्टोबर 10, 2021 मा 01: 49
यहाँ धेरै बीएस मा कल गर्न को लागी। A. एक संयुक्त विमान वा चालक दल होइन, यो एक कम्यूटर एयरलाइन थियो। B. यदि मर्मत सम्भारले क्याप्टेनलाई चेतावनी दियो कि त्यहाँ बिग्रेको प्रणालीमा कुनै लिखित रिपोर्ट किन छैन? C. मलाई धेरै शंका छ कि युनाईटेड ब्यवस्थापन मा कोहि पनि प्रेस संग बोल्नेछन् कि यो "कुनै ठूलो कुरा" थिएन किनकि यो छोटो उडान थियो। त्यहाँ प्रत्येक कथा को दुई पक्षहरु छन् र यो एक प्वाल भरिएको छ।